Earpieces: ठूलो क्षमता सानो उपकरण
आजकल शायद सामान्य सार्वजनिक प्रविधि मा नवीनतम घटनाहरु चकित: हामीलाई नयाँ-चाल फोन, त्यसपछि बच्चाको खेलौना इलेक्ट्रनिक्स संग भरी केहि भेटी लागि ग्राहकहरु 'ठूलो कम्पनीहरु konkutrenty लाईक लगभग हरेक हप्ता लडाई मा, भ्याकुम क्लिनर लगभग एक्लै छ लागि सबै काम गर्दछ घर।
तर, यी अवस्थामा, त्यहाँ अझै पनि कोठा चमत्कार छ। इयरफोन, उदाहरणको लागि, यसको सबै लघुरूप एकदम सुधार गर्न सक्छन्; जीवन हाम्रो गुणस्तर। यो रिसीभर, साना अनुमति दिन्छ जो आकार, चालै नपाई कान भित्र यसलाई लगाउने। इयरफोन स्पष्ट अडियो संकेत प्राप्त र एक व्यक्तिको सुनुवाइ कुनै नकारात्मक प्रभाव छ।
उपकरण जस्तै 337. कार्य सत्र एक ब्रेक बिना दुई घण्टा पछिल्लो गर्न सक्छन् सानो ब्याट्री द्वारा तार को उपस्थिति र संचालित होइन। सामान्यतया, यो समय उपकरण लागू गरिन्छ जसको लागि उद्देश्य हासिल गर्न पर्याप्त छ। को microdevice कान बाहिर प्राप्त गर्न, यो एक धेरै पातलो तर बलियो नायलन मुद्दा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
अडियो संकेत हस्तान्तरण हुन सक्छ या त सेलुलर फोन मार्फत, वा सेलुलर फोन प्रयोग। एक विशेष उपकरण लागि प्राथमिकता स्थिति आधारमा दिइएको छ। रेडियो वा सेलुलर - यो प्रेरणा पाश को चयन पनि बाहिर छ प्रयुक्त संचार को प्रकारको आधारमा।
व्यावहारिक आवेदन mikronaushnikane कुनै सीमा थाह छ। उदाहरणका लागि नाटकीय प्रदर्शन, समयमा यो प्राविधिक Marvel माग। Prompter अब एक जोर लेकानेखुसीगर्छ, को Forefront मा श्रव्य शीघ्र गर्न आवश्यक छ। सधैं सार्वजनिक शीघ्र सुन्न हुनेछ समसामयिक र पारदर्शी भएको माइक्रो अभिनेता को मद्दतले।
त्यस्तै, यो उपकरण र टेलिभिजन कार्यक्रम को व्यवस्थापन प्रयोग गरेर। साथै, माइक्रो र परीक्षा समयमा विद्यार्थीहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। पुरानो सोभियत कमेडी "अपरेसन" वाई "र अन्य साहसिक Shurik" को लापरवाह विद्यार्थी मात्र यस्तो प्रविधि र यसको क्षमता को सपना सकेन।
साथै, उपकरण महत्त्वपूर्ण सभाहरूमा को व्यवस्थापन र विशेष घटनाहरू समयमा प्रयोग गरिएको छ। Earpieces चुनाव, अभियान भन्दै राजनीतिज्ञ र एक ठूलो दर्जा को अधिकारीहरु, स्वागत र congratulatory भाषण छन्।
यसरी, आश्चर्यजनक छैन, यो लघु उपकरण लोकप्रियता दुवै विदेश मा र हाम्रो देशमा बढिरहन्छ।
फोन नम्बर शहर पत्ता लगाउन लागि जाँदा
असीमित इन्टरनेट टन: आफ्नो फोन, ट्याबलेट, वा कम्प्युटरमा जडान
को टन कोठा "इन्टरनेट वीआईपी टन" कसरी असक्षम?
बैंक कार्ड "बीलाईन" र बैंक "प्लास्टिक"
कसरी जडान गर्न, प्रयोग, र कसरी "Avtoplatezh" ( "Sberbank") असक्षम?
आज रूसको सैन्य विमानन। रूसमा उडान स्कूल
क्लब होटल Sunbel4* (टर्की, Kemer): फोटो र समीक्षा
Tencel, एक कपडा - यो के हो?
आफ्नो हातमा 4x6 स्नानको आधार: स्थापना, निर्देशन र प्रविधि
Rania, जोर्डन इतिहास टेकओफ को रानी
सेन्ट ग्रेगरी येरेवन मा Illuminator गिरजाघर
को Puff झागवाला मुछेको व्यञ्जनहरु। अस्थिर खमीर आटा: खाना पकाउन के?
EDS - के यो छ? इलेक्ट्रोनिक डिजिटल हस्ताक्षर: शुरुवातका लागि निर्देशन
जापानी baktusy spokes। Openwork baktus spokes। baktus कसरी लिंक गर्न? Spokes र हाम्रो निर्देशन तपाईंलाई मदत गर्नेछ